आजको राशिफल असार २४ गते बिहीबारGandaki Press
आजको राशिफल असार २४ गते बिहीबार
असार २४, २०७८ ०६:२६ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल आषाढ २४ गते बिहीबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई ८ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यउत्तरायण, ग्रीष्मऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढकृष्णपक्षको चतुर्दशी तिथि मध्यरात्रि पछि ४ः३६ बजेसम्म, त्यसपछि औंशी रहनेछ ।
मेष – पूर्वार्द्ध समयमा सानातिना समस्या र झमेलाले छाड्ने छैन । तर मध्यान्ह पछि कृतिप्रदायक कार्य गरिनेछ । साथीभाइको साथ सहयोग मिल्नाले असंभव कार्य पनि बन्नेछन् । आकस्मिक धन लाभको योग बनेको छ ।
वृष – उत्साह उमंग छाउनेछ । सामान्य प्रयासले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । मध्यान्ह पछि स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । गरेको लगानि अनुरुपको लाभ मिल्ने छैन । आफन्त टाढिने छन् । परेशानी व्यहोर्नु पर्नेछ ।
मिथुन – व्यर्थको कार्यमा भुल्नाले जिम्मा लिएका कार्य समयमै पूर्ण गर्न सकिने छैन । मध्यान्ह पछिको समय केही अनुकूलको बन्नेछ । अधुरा कार्यलाई पूर्ण गर्न सकिनेछ । महत्वपूर्ण कार्यको नेतृत्व मिल्ने देखिन्छ ।
कर्कट – सहोदरका व्यक्तिको साथ सहयोग पाइनेछ । कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ मिल्नेछ । मध्यान्ह पछि स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । अरुको भर विश्वासमा कार्य नसुम्पनु होला । नयाँ कार्यको आरम्भ समेत शुभ देखिन्न ।
सिंह – आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नयाँ लगानि गरिनेछ । तपाईँको काम गर्ने कलाले समाजमा वेग्लै तरंग पैदा गर्नेछ । जिम्मेवारीलाई सही रुपमा बहन गर्न सकिनेछ । सहमतिद्वारा समस्यालाई सुल्झाउन सकिनेछ ।
कन्या – पूर्वाद्र्धमा केही अन्योलता रहेता पनि उत्तराद्र्धमा सकारात्मक सोचाइ रहनेछ । सामाजिक कार्यबाट सम्मान मिल्नेछ । अध्ययनमा रुचि बढ्नेछ । मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ । सामाजिक पदप्रतिष्ठा मिल्नेछ ।
तुला – अवसरलाई चिन्न सकिने छैन । मध्यान्ह पछि सामान्य स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । समर्थकहरुको साथ पाइनेछ । धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा समेत केही जस पाइने देखिन्छ । पूर्व तयारी र योजना बनाएर कार्य थाल्नुहोला ।
बृश्चिक – हर्षाेल्लासको वातावरण बन्नेछ । पतिपत्नि बिचको सम्बन्ध प्रगाढ रहनेछ । मध्यान्ह पछि शोकप्रद खबर सुन्नुपर्ला । आर्थिक लगानि गर्दा तनाब मात्र थपिनेछ । विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्ने छन्, सतर्क रहनु होला ।
धनु – श्रमको उचित मूल्यांकन मिल्दा कार्य गर्न मन लाग्नेछ । आर्थिक उपार्जनका कार्यमा ध्यान जानेछ । अग्रज व्यक्तिको सहयोगले कार्य गर्दा इच्छित कार्य पूरा हुनेछन् । धेरै व्यक्तिको मन मस्तिस्कमा बस्न सकिनेछ ।
मकर – झन्झटिला कार्य आइलागेता पनि नतिजा तपाईँकै पोल्टामा पर्नेछ । पारिवारिक जमघटले खुसीयाली छाउनेछ । बौद्धिक क्षमताको बृद्धि विकास हुनेछ । दिनको पूर्वाद्र्धको तुलनामा उत्तरार्धको समय अनुकूलको रहनेछ ।
कुम्भ – पूर्वाद्र्धमा समस्याले छाड्ने छैन । व्यर्थको कार्यमा समय वित्नेछ । मध्यान्ह पछि सन्तानको सहयोगले कार्य बन्नेछन् । पढाइलेखाइमा समेत केही प्रगतिको संकेत देखिन्छ । बौद्धिक क्षमताको बृद्धिविकास हुनेछ ।
मीन – आत्मबल आत्मविश्वास थपिनेछ । आफ्नै बाहुबलले नै धेरै क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ । मध्यान्ह पछि एक्कासी समस्या सृजना हुनेछ । आफन्तजनसँग विवाद बढ्नेछ । झन्झट एवं तनाबको स्थिति आइलाग्नेछ ।